‘स्काई स्पोर्टस खेल्ने र खाने कम्प्रिहेन्सिभ स्पोर्टस क्लब हो’ – Arthik Awaj
‘स्काई स्पोर्टस खेल्ने र खाने कम्प्रिहेन्सिभ स्पोर्टस क्लब हो’
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर २७ गते बिहीबार १६:०६ मा प्रकाशित
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पोखरा स्काई स्पोर्टस
पोखराको भाटभटेनीको माथिल्लो तलामा पोखरा स्काइ स्पोर्टस शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आउँदैछ । स्काई स्पोर्टसको शुक्रबार ग्राण्ड ओपनिङ गर्ने कार्यक्रम छ । स्काई स्पोर्टसका विशेषता, सेवा सुविधा लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप दवाडीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
स्काई स्पोर्टस कस्तो ठाउँ हो ?
स्काई स्पोर्टस खेल्ने र खाने कम्प्रिहेन्सिभ स्पोर्टस क्लब हो । एउटै छानामुनी विभिन्न किसिमका खेल खेल्न पाउनुका साथै आफूले रोजेको खानाका हाइजेनिक परिकार खान पाउनु यहाँको मूख्य विशेषता हो । जहाँ मानिसले आफूले चाहेको शारिरिक अभ्यास गर्दै स्वस्थता प्राप्त गर्नसक्छ र हाइजेनिक खानाका परिकार खाएर आनन्द लिनसक्छ ।
स्पोर्टस क्लब भन्नुभो, केके खेल्न पाइन्छ ?
स्काई स्पोर्टस खेलकुदको प्याकेज गन्तव्य हो । यसमा अहिलेको पपुलर खेल फुटसल, लन टेनिसलगायतका खेल खेल्न सकिन्छ । मनोरञ्जनका लागि पुल हाउस पनि स्काई स्पोर्टसमै छन् । त्यतिमात्र होइन युवा तथा वयस्काहरुका लागि शारीरिक सुगठन निर्माणका लागि जिम र कार्डियो पनि छ ।
त्यस्तै फुर्तिलो शरिर बनाउन चाहनेका लागि जुम्बापनि एउटै छानामा छ । शारीरिक अभ्यास मात्र होइन, हामीले थकानबाट मुक्त हुनका लागि साउना, स्टिम, ज्योकोजी पनि राखेका छौं । जहाँ थकित महिला तथा पुरुष आएर आनन्द लिन सक्छन् । हामीले स्काई स्पोर्टसमा भर्चुअल रियालिटी र प्ले स्टेशनको पनि सुविधा राखेका छौं ।
धेरै खालका सुविधा रहेछन्, कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
हामीले स्काई स्पोर्टसमा आउनेहरुलाई समस्या नहोस् भनेर धेरै साबधानी अपनाएका छौं । हरेकको छुट्टै सेक्सन बनाएका छौं । जस्तै साउना, ज्याकोजी, जुम्बा र कार्डियो लगायतलाई स्पोर्टस सेक्सन अन्तर्गत राखेका छौं । युवाको लागि पुल हाउस छ । बालबालिकाका लागि छुट्टै सेक्सन छ । जुम्बा र कार्डियोको छुट्टै सेक्सन छ ।
स्काई स्पोर्टस कुन वर्ग र समूहलाई टार्गेट गरेर बनाइएको हो ?
यो हामीले सबै वर्गलाई उत्तिकै टार्गेट गरेर बनाएका हौं । युवाका लागि पुल हाउस छ । जिम र फुटसल पनि छ । महिलाका लागि जुम्बा र कार्डियो लागि छ । साउना, ज्याकोजी लगायतका थकान मेट्ने युवादेखि बृद्धबृद्धासम्मलाई हुन्छ । बालबालिकाका लागिपनि पनि छुट्टै सेक्सन भएकाले यो सबै वर्ग र समूहका लागि उपयुक्त छ । यो सस्तो पनि भएकाले निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग सबैका लागि उपयुक्त छ ।
रेष्टुरेण्टबारे के भन्नुहून्छ ?
एउटै छानामुनी सबै सुविधा दिने उद्देश्यले रेष्टुरेण्टपनि समावेश गरिएको हो । हामीले रेष्टुरेण्टबाट अर्गानिक खाना, खाजा खुवाउने उद्देश्य राखेका छौं । रेष्टुरेण्टसँगै वारपनि छ । वारमा बसेर कुनैपनि व्यक्तिले आफूले चाहे अनुसारको स्वाद लिनसक्छ । त्यस्तै, स्र्काइ स्पोर्टसमा कफी सप र जुसवारपनि छ । ड्रिङ्क्स नगर्नेहरुले कफी र जुस लिन सक्छन् । यसरी हामीले खानामा पनि विविधता दिएर सबैलाई समेट्न खोजेका छौं ।
स्काई स्पोर्टस कस्ता व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुन्छ ?
स्काई स्पोर्टस विशेषगरि व्यस्त व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुन्छ । जोसँग समय छैन र जीवन अस्तव्यस्त छ, हो त्यसका लागि त झन् यो सबैभन्दा उपयुक्त हो । किनकि यहाँ एउटै छानामुनी उसले चाहेको सबै सुविधा प्राप्त गर्नसक्छ । जो पैसा भएरपनि सुविधा नपाएर भौतारिएका छन् उनीहरुका लागि यो उपयुक्त छ । किनकि यो लक्जरियस पनि छ । यहाँ हामी हाई स्ट्याण्डर्ड लेभलको सुविधा र सन्तुष्टी दिन्छौं । यहाँ खेल्नु र खानुको छुट्टै मज्जा हुन्छ ।
यहाँको थप विशेषता के हो ?
यहाँबाट माछापुच्छ«े हिमाल र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । फेवाताल तालकै नजिक गएजसरी अवलोकन गर्न सकिन्छ । पोखरा बजार सजिलै नजिकबाट देख्न सकिन्छ । अझ साँझमा धपक्क बलेको पोखरा यहिंबाट देख्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन खेल खेलिसकेपछि यसैको तल भाटभटेनी भएकाले त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक सबै सामानहरु सपिङपनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो ठाउँ बहुउपयोगी छ ।
यो सञ्चालन गर्ने साेंचचाहिं कसरी आयो ?
नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने आत्मसाथ गरेर हामी युवाहरुले स्काई स्पोर्टस खोलेका हौं । यहाँ मान्छेहरु पैसा भएरपनि सुविधा नपाएर भौतारिएको देख्यौं । यहाँका मान्छेहरु व्यस्त भएर समय अभाव हुँदा स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेका देख्यौं । अनि नयाँ नयाँ स्वादका लागि रेष्टुरेण्ट चाहार्दै हिंडेका पनि देख्यौं । हो तिनै मानिसहरुलाई टार्गेट गरेर हामीले एउटै छानामुनी सबै सुविधा दिने उद्देश्यले स्काई स्पोर्टस खोलेका हौं ।
ओपनिङमा केकस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ?
ओपनिङ ईभेन्टमा हामीलाई रुस्लानले साथ दिएको छ । डिसेम्वर १४ मा एड्रिन प्रधान आउदै हुनुहुन्छ । १५ मा स्वप्न सुमनको प्रस्तुती रहनेछ । डिसेम्बर १५ मा फेसन शो पनि रहेको छ । यसका लागि मोडल नीति शाह आउनु हुन्छ । १६ तारिखमा दीपक बज्राचार्य र उहाँँको व्याण्डको लाइभ प्रस्तुती रहनेछ । विहान १० बजेदेख बेलुका ५ बजेसम्मको लागि एक्जिबिसन पनि रहेको छ । यो प्रोजेक्ट कसरी बन्यो यसमा प्रयोग गरिएका सामान कहाँबाट ल्याइयो कुन कम्पनीले डिजाइन गरेको हो यसको आर्किटेक्चर डिजाईन कसले बनायो, नेटवर्किङ कसले ग¥यो लगायतका कुराको जानकारी एक्जिबिसनमा लिन पाईन्छ । वेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म सांगीतिक कार्यक्रम रहेको छ । २८ गते ११ बजेदेखि १ बजेसम्म उद्घाटनको औपचारिक कार्यक्रम छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
लगानी कति छ र स्टाफ कति हुनुहुन्छ ?
५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै यसमा लगानी भईसकेको छ । ४३ जना फुल टाइम र १० जना पार्ट टाइम स्टाफ हुनुहुन्छ । कर्पोरेट अफिसमा ५ जनाको टिम छ । ५८ जना स्टाफ हामीसँग हुनुहुन्छ । ओपनिङको लागि सेक्युरिटी टिम सहित ५० जना स्टाफ ल्याएका छौं ।